UNHCR Yobatsira South Africa Kuti Iongorore Magwaro eVanhu Vari Kutsvaga Hupoteri
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muhupoteri muSouth Africa zvinoti zviri kutambira nemufaro rubatsiro rwakapihwa nyika iyi neUnited Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, zvichiti zvichaita kuti South Africa isimudzire mabasa ayo ekuongorora magwaro evanhu vari kutsvaga hupoteri munyika iyi.
Mufaro uyu unouya zvichitevera mari inoita zana nemakumi mana emamiriyoni ema Rands yakapihwa South Africa svondo rino.
Mari iyi ichashandiswa kwemakore mana mukusimudzira kuongororwa kwemagwaro evanhu vakanyimwa hupoteri vakakumbira kuti nyaya dzavo dziongororwe zvakare sezvinodiwa nemutemo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, Muzvare Loveness Gotora, varumbidza chiitiko ichi vachiti rubatsiro urwu ruchaita kuti basa rifambe zvakanaka uye nekuchimbidza.
Asi sachigaro weZimbabwe Exile Forum, VaGabriel Shumba, vanoti dambudziko rekunonoka kuburitswa kwemagwaro evari kutsvaga hupoteri riri kukonzerwa nemashandiro anoita vashandi vemubazi iri, kwete kushaikwa kwemari.
Hurumende yeSouth Africa inoti ine vanhu vanodarika mazana mana ezviuru vakanyorera kuti vapihwe hupoteri, uye haikwanisi kupedza kuongorora magwaro aya mukati menguva pfupi.
Gurukota rezvemukati meSouth Africa, VaAaron Mutsoaledi, vanoti mari iyi ichashandiswa kutenga michina yekushandisa, kuwedzera vashandi vane ruzivo, kudzidzisa vashandi vemubazi iri kuitira kuti vakwanise kuongorora magwaro aya nekukurumidza pamwe nekupeta ongororo dzavo mukati menguva pfupi.
VaMutsoaledi vanoti bazi ravo rakanangana nekupedza kuongorora magwaro ari mumaoko aro anosvika zviuru zana nemakumi matanhatu nezvitatu, 163 000, pasi pechirongwa chiri kutsigirwa neUNHCR.
ASi VaShumba vanoti dambudziko rakatarisana neSouth Africa harisi chete rekunonoka kugadzira magwaro evanhu vari kutsvaga hupoteri, asi kuti kune zvizvarwa zvakawanda zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinoda magwaro akasiyana siyana ayo ari kutora nguva yakareba kuti abude.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakatiza misha yazvo zvichienda kuSouth Africa nepamusana pezvikonzero zvinosanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika pamwe nekuoma kwehupenyu muZimbabwe.
Kunyange hazvo pasina huwandu hwakajeka hwekuti vanhu vangani vemuZimbabwe vari muSouth Africa, masangano anoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika anoti kubva muna 2000, vanhu vemuZimbabwe vari pakati pemiriyoni imwe chete nemamiriyoni mashanu vakayambuka Limpopo vachinotsvaga mafuro manyoro, kutiza mhirizhonga pamwe nezvimwe zvikonzero.
Asi vazhinji vevanhu ava vanonzi havana magwaro izvo zviri kupa kuti huwandu hwevanhu vemuZimbabwe vari muSouth Africa hunetse kuziva.